Caalamka, 01 April 2017
Saraakiisha dalka Pakistan ayaa sheegay in qarax bam oo xooggan uu ruxay suuq mashquul badan oo ku yaalla magaalo qabaa’ilka degaan oo dhacda waqooyiga galbeed ee dalkaas ee xuduuda Afghanistan, halkaasi oo 22 qof ay ku dhinteen in ka badan 50 kalena ay ku dhaawacmeen.
Madaxweynaha Golaha Yurub oo ka Hadlay Brexit
Madaxweynaha Golaha Yurub ayaa sheegay in nolosha dadka ay noqon doonto muhiimadda koowaad marka ay timaado go’aanada wada-xaajoodyada Britain ay uga baxeyso Midowga Yurub.
Shirka Jaamacadda Carabta oo ka Furmay Camaan
Madaxda wadamada ku bahoobay ururka Jaamacadda Carabta oo ay Somalia iyo Djibouti ku jiraan, ayaa kullankooda 28-aad ee madaxda ururkaas sanadkan ku leh magaalada Camaan ee dalka Jordan.
Shir Looga Hadlayo Gudniinka Fircooniga oo ka Socda Sweden
Magaalada Kristianstad ee dalka Sweden waxaa ka socda shir lagaga hadlayo dhibaatooyinka lagala kulmo gudniinka fircooniga ee gabdhaha.
Shaqaale Gargaar oo Lagu Dilay Koonfur Sudan
Saraakiisha QM ayaa sheegay in lix shaqaalaha gargaarka bani’aadannimo ah lagu dilay weerar ku dhufo oo ka dhaqaaq ah oo ka dhacay dalka Koonfur Sudan.
Mosul: 100 ku Dhimatay Duqeymaha Cirka ah
Isbahaysiga Milateri ee uu hoggaamiyo Maraykanku ayaa weeraro xagga cirka ah ku qaaday Mosul, waxaana dad goobjoog ahi ay sheegeen in weeraradaas ay ku dhinteen in ka badan 100 rayid ah.
Holland: Dowlad Isbaheysi oo ay Tahay In La Soo Dhiso
Muddo 10 casho ah ayaa ka soo wareegtey marki lasoo gaba-gabeeyey doorashadi dalka Holland oo indhaha adduunka oo dhan soo jiidatey.
Golaha Ammaanka ee Q.M. oo ka Hadlay Soomaaliya
Golaha Amaanka ee Q.M ayaa ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada New York waxay uga hadleen arrimaha abaarta sii baahayso ee Soomaaliya.
Dad Kale oo loo Xiray Weerarkii London
Booliska magaalada London ayaa maanta sheegay in laba qof oo kale ay u xireen weerarkii ka dhacay meel ku dhow xarunta baarlamanka Britain.